‘हरेक काम राम्रो हुनुपर्छ’ भन्ने सोंचले एक दिन बिरामी बनाउँछ
Tuesday, 17 Apr, 2018 4:58 PM
४ बैशाख, काठमाडौं । बाल्यकालदेखि नै हामीलाई हरेक काम निकै राम्रोसँग, कत्ति नबिगारी, कुनै पनि कसर बाँकी नराखेर गर्न सिकाइन्छ । ‘पर्फेक्सनिज्म’ (पूर्णतावाद) शब्द हामीलाई जडीबुटीझैँ घोटेर सानैमा पिलाइन्छ । यो शब्द हाम्रो मनमा यति जोडले गडेर बसेको हुन्छ कि यदि कुनै काम गर्दा रौं बराबर कमजोरी भयो भने पनि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहदैनौं ।
यद्यपि यस्तो सबैले गर्दैनन् । धेरै मान्छे बेपर्वाह हुन्छन् । पर्फेक्सनिज्म यानेकी हरेक काम विना कुनै कमीले सम्पन्न गर्नु । सामान्यरुपमा यसलाई राम्रै अर्थले लिइन्छ । तर, हालैका ‘रिसर्च’ले के पुष्टि गरेको छ भने, पर्फेक्सनिज्मको आदत एक प्रकारको दिमागी खलल हो । यसले स्वास्थ्यमा निकै खराब असर पार्छ । आश्चर्य लाग्दो कुरा आजकलका मानिससमा यो आदत मजबूत हुँदै गइरहेको छ ।
बेलायतका दुई अनुसन्धानकर्ता कुरैन र एन्ड्रयू हिल्सले सन् १९८९ देखि २०१६ सम्म विस्तारपूर्वक कैयौं पिढीमा यसबारे रिसर्च गरेका थिए । यो रिसर्च बेलायत, अमेरिका र क्यानडाका छात्राहरुमा गरिएको थियो । त्यसक्रममा के पाइयो भने, हरेक बर्ष कलेज आउने छात्रामा पर्फेक्सनिज्म बानी गहिरो गरी बसेको थियो ।
रिसर्चर यो बानीलाई महामारी मान्छन्, जुन बडो तेज गतिले फैलिरहेको छ । बच्चाहरुमा पनि यो आदत बढिरहेको छ । यस्तो बानीले उनीहरुलाई आफ्नो क्षमता र व्यक्तित्वलाई बुझ्न रोक्छ । बच्चाहरुमा आफ्नो हारलाई खुला मनले स्वीकार गर्नबाट बञ्चित गराउँछ ।
वास्तवमा पर्फेक्सनिज्म या पूर्णतावादजस्तो चिज यो दुनियाँमा हुँदैन । हरेक व्यक्तिमा केही न केही कमजोरी अवश्य हुन्छ । पृथ्वी त पूर्णरुपमा गोलो छैन भने कुनै कामविना कमीको पुरै ठिक हुन्छ भनेर कसरी मान्ने ? यो सम्भव छैन । यही कमी हाम्रो जीवनमा पनि हुन्छ । हरेक चिजलाई देख्ने र बुझ्ने आ–आफ्नै नजर हुन्छन् । जुन चिज तपाईँलाई पर्फेक्ट लाग्छ, हुनसक्छ त्यही पर्फेक्सनिज्ममा अर्को व्यक्तिले कमजोरी खोजिरहेको पनि हुन सक्छ !
पफेक्सनिज्मको मान्यताको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने यसले मान्छेलाई गल्ती गर्नबाट रोक्न खोज्छ । जबकी ठूला–ठूला विद्वानहरुको भनाइ भने ‘जब तिमीले गल्ती नै गर्दैर्नौं भने सुधार पनि सम्भव छैन । बास्तवमा जीन्दगीका अनुभवले पनि गल्ती गरेपछि नै कहाँ कमी छ भन्ने महसुश गराउँछ’ भन्ने छ ।
हरेक गल्तीले नै पर्फेक्सनिज्म ल्याउँछ । यो नियम केवल काममा मात्रै होइन, बरु मानवीय सम्बन्धमा पनि पूर्णरुपले लागू हुन्छ । गल्ती गरेर त्यसलाई सुधारेमा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । हरेक चिजमा सुधारको संभावना हमेसा कायम रहन्छ ।
परर्फेक्सनको बानी सफलताको लागि आडमात्र बनेर आउँदैन, बरु अनगिन्ती बिमारीलाई जन्म दिन्छ । जस्तो तनाव, अनिद्रा, आत्महत्याजस्ता सोंच मनमा आउँछ । आफैँलाइ नेक्सान पुर्याउने विचारलाई जन्म दिन्छ । हरेक चिजमा कुनै न कुनै कमी खोजिरहने बानी पर्फेक्सनिज्मको कारणबाटै आउने हो । यसले मान्छेलाई पूर्णरुपले मानसिक रोगी बनाइदिन्छ ।
रिसर्चर सारा इगनका अनुसार जति तपाईँ पर्फेक्सनिज्मतर्फ लम्किनुहुन्छ, त्यति नै तनावले घेरिँदै जानुहुन्छ । त्यसो त पर्फेक्सनिज्म नकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केही हदसम्म ठिकै हो । आफ्नो उदेश्य पूरा गर्नको लागि उच्च महत्वाकांक्षा राखेर काम गर्नु सकारात्मक पर्फेक्सनिज्मको लागि पहिलो कदम हो । यदि आफूले चाहेजस्तै नतिजा नआए पनि हतास हुनुको सट्टा फेरि पनि त्यसलाई मेहनत र लगनसाथ गर्दा असल पर्फेक्सनिज्मतर्फ लैजान्छ । कुनै काम सोचेअनुसार भएन वा असफल भइयो भने तनाव लिएर आफ्नो समय र जीन्दगीलाई अस्तव्यस्त पार्नु नकारात्मक पर्फेक्सनिज्म हो ।
चीनमा एक हजार विद्यार्थीमा गरिएको अनुसन्धानले के पत्ता लगायो भने जसले आफ्नो कमीकमजोरीलाई मनैबाट स्वीकार गरेर मेहनतका साथ काम गरिरहेका थिए उनीहरु ज्यादा खुसी र सिर्जनशील देखिन्थे ।
यसको अलावा पर्फेक्सनिज्मको पछि दगुर्नेहरु चाँडै नै हिम्मत हार्छन् । एकपटक असफल हुनेबित्तिकै उनीहरुको मनले भन्न थाल्छ, अब सबै खत्तम भयो । उनीहरुलाई आफ्नो हारमा लाज लाग्न थाल्छ । जबकी यो बास्तविकता होइन । हाम्रो दिमागमा पर्फेक्शनिज्मजस्तो बिमारीको जन्म दिन र त्यसलाई कायम राख्न धेरै हदसम्म हाम्रो समाज र अर्थव्यवस्था जिम्मेवार छ ।
कार्यालयमा तिनै कर्मचारीहरुलाई ज्यादा महत्व दिइन्छ जसको काममा कुनै कमी देखिंदैन । तमाम ठूला जिम्मेवारी र फाइदा यस्तै कर्मचारीले पाउँछन् । जसको काममा थोरबहुत कमी रहन्छ, उनीहरु पनि अफिसियल जिम्मेवारी बोक्न चाहन्छन् । परिणाम पर्फेक्सनको आँकडा छुन उनीहरु पनि दिनरात कोशिसमा लाग्छन् । कहिलेकाहीँ त पर्फेक्सनिज्मको पछि दगुर्दा ज्यादा गल्ती हुन जान्छ र तनावको शिकार हुन पुग्छन् । पर्फेक्सनको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मानसिक विश्राम हो । परफेक्ट हुनको लागि आफैँलाई यो सम्झाउन जरुरी छ कि गल्ती जोकसैबाट पनि हुन सक्छ । अरुको गल्तीलाई माफ गर्न सिकौं । आफ्नो गल्ती सुधारेर त्यसलाई फेरि मेहनत र लगनशीलताका साथ अघि बढाउने कोशिस गरौं ।
बिना गल्ती कामलाई सम्पन्न गर्न खोज्नु राम्रो कुरा हो । तर, यसलाई जीवनको एकमात्र उदेश्य बनाउनु ठीक होइन । एजेन्सी